टाइल जोइन्टहरू सेतो बनाउने युक्तिहरू | बेजिया
टोय टोरेस | 12/05/2022 10:00 | घर
टाइल जोइन्टहरू सेतो नगरी भान्साकोठा वा बाथरूम सफा गर्नु भनेको कुनै पनि इनाम बिना कडा परिश्रम गर्नु जस्तै हो। किनभने वास्तविकता यो हो कि पहिलो नजरमा, जोर्नीहरू सेतो नभएमा टाईलहरू फोहोर भएको देखिन्छ। यसलाई समाधान गर्न तपाईंले ठूला कामहरू गर्नुपर्दैन, वा सबै नयाँ र चम्किलो देख्ने आनन्दको लागि टाइलहरू परिवर्तन गर्ने विचार गर्नुहोस्।
तपाईंले भर्खर सही उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुपर्छ र तलका जस्तै केही सुझावहरू पालना गर्नुपर्छ। र सानो प्रयास संग तपाईंले ती जोडहरू पूर्ण रूपमा सेतो छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यो, यद्यपि हामी जान्दछौं कि यो आवश्यक छैन, यसले त्यो वातावरणमा मनको शान्ति प्रदान गर्दछ जुन घरको रूपमा महत्त्वपूर्ण छ।
1 कसरी टाइल जोड़हरु सेतो गर्न
1.1 अन्य तरिकाहरू
कसरी टाइल जोड़हरु सेतो गर्न
यस उद्देश्यका लागि बजारमा धेरै विशिष्ट उत्पादनहरू छन् र यदि तपाईंलाई धेरै कालो जोडहरू सेतो गर्न आवश्यक छ, मोल्ड वा ठाउँको साथ जुन धेरै ध्यान नपुगेको छ, ती मध्ये एक प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ। अब प्रयोग गर्दा, बाथरुममा भएको आर्द्रता, भान्साकोठामा जम्मा हुने ग्रीस आदिका कारणले टाईलको जोर्नीमा फोहोर हुनु सामान्य हो भने । सबै भन्दा राम्रो अमोनिया र पानी हो।
तपाईंले सुरु गर्नु अघि तपाईंले आफैलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ किनभने अमोनिया धेरै बलियो हुन्छ। मास्क लगाउनुहोस् ताकि तपाईंले धुवाँ सास फेर्नुहुन्न। र केही रबरको पन्जा लगाउनुहोस् ताकि तपाईको नङ र हातलाई क्षति नहोस्। मिश्रणको लागि तपाईलाई तातो पानी र अमोनियाको स्प्ल्याशको साथ बेसिन चाहिन्छ। यदि तपाईं मापन कसरी गणना गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने, यो प्रत्येक 10 पानीको लागि कम वा कम अमोनिया हुनेछ।
अर्ध-कडा ब्रिस्टल संग लामो ब्रश प्रयोग गर्नुहोस् सकेसम्म धेरै फोहोर हटाउन। यस उपकरणको साथ तपाईं सतहको रूपमा एकै समयमा टाइलहरूको जोडहरू सफा गर्न सक्नुहुन्छ। यसले फोहोर क्षेत्रहरूमा वा हानिकारक बीजाणुहरू र ब्याक्टेरियाहरू हटाउन मोल्ड भएको ठाउँमा राम्रोसँग काम गर्छ। त्यसपछि फोहोर हटाउन तातो पानीले भिजाएको कपडा पास गर्नुहोस्। यदि तपाईं पानीका थोपाहरू हटाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले तिनीहरूलाई सफा, सुक्खा कपडाले पुछ्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरू चम्किलो र सफा पनि हुनेछन्।
अमोनिया मूर्ख छ, तर यो एक मात्र उत्पादन होइन जुन तपाईले टाइल जोडहरू सफा गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। घरमा तपाइँ निम्न जस्तै अन्य समाधान पाउन सक्नुहुन्छ.
ब्लीच संग: सबै भन्दा राम्रो कीटाणुनाशक, यद्यपि स्वास्थ्य को लागी केहि खतरनाक छ। ब्लीचको साथ तपाईले टाइलको जोर्नीहरू सेतो गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा कीटाणुरहित गर्न सक्नुहुन्छ। ती कठिन कुनाहरू राम्रोसँग पहुँच गर्न तपाईंले स्प्रेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईंले गर्नुपर्नेछ ब्लीचको एक भागसँग पानी (सधै चिसो) मिलाउनुहोस्.
टुथपेस्ट: परम्परागत टूथपेस्ट पनि टाइल जोर्नीहरूको लागि एक शक्तिशाली क्लीनर हो। हो, प्रयोग गर्नुहोस् दाँत सेतो बनाउन डिजाइन गरिएको छ, किनकि तिनीहरूमा बाइकार्बोनेट हुन्छ, जुन उत्पादन हो जसले जोर्नीहरूलाई सेतो बनाउँछ। यस अवस्थामा, हामी पुरानो टूथब्रश प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छौं जसको साथ तपाईले सेतो गर्न चाहनुहुने क्षेत्रहरूमा राम्रोसँग रगड्न सक्नुहुन्छ। केहि थप श्रमसाध्य, तर समान रूपमा प्रभावकारी।
सेतो सिरका र बेकिंग सोडा: उत्तम क्लिनर र कीटाणुनाशक जुन तपाईंले आफ्नो घरको कुनै पनि कुनामा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो भन्न थाक्दैनौं र यो हो सिरका सफाई बाइकार्बोनेटको साथमा, तिनीहरू बजारमा उत्कृष्ट कीटाणुशोधन उपकरण बनाउँछन्। सस्तो, फेला पार्न सजिलो, पारिस्थितिक र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सुपर व्यावहारिक। तयारी गर्नुहोस् तातो पानी, सेतो सिरका र बेकिंग सोडाको साथ डिफ्यूजर भएको कन्टेनर। जोर्नीहरूमा स्प्रे गर्नुहोस् र पुरानो टूथब्रशले स्क्रब गर्नुहोस्। यो उपाय विशेष गरी जोर्नीहरूको लागि उपयोगी छ जुन धेरै कालो छ र मोल्डको निशानहरू छन्।
यी मध्ये कुनै पनि चालको साथ तपाईले टाइलको जोर्नीहरू सेतो पार्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा सफा र कीटाणुरहित छोड्न सक्नुहुन्छ। अत्यधिक फोहोर जम्मा हुनबाट जोगिन र सफा गर्न धेरै समय खर्च गर्नु पर्दैन, यो हरेक पटक एक समीक्षा गर्न राम्रो छयसले यसलाई जम्मा हुनबाट रोक्नेछ। तपाईंले नियमित रूपमा टाइलहरू सफा गरे तापनि, जोर्नीहरूमा छिद्रपूर्ण सामग्रीहरू प्रयोग गरिन्छ जसमा आर्द्रताको कारण मोल्डलाई सजिलै फैलाउन सकिन्छ। थोरै हेरचाहको साथ, तपाईं तिनीहरूलाई लामो समयसम्म सफा र उत्तम राख्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » टाइल जोडहरू सेतो पार्ने युक्तिहरू
टोक्सोप्लाज्मोसिस के हो र यसले गर्भावस्थालाई कसरी असर गर्छ?